FMUSER FU-1000C 1KW FM Gudbinta Xarunta Raadiyaha FM
Wadarta (USD): 1840
Ku saabsan FMUSER FU-1000C
Dalab gaar ah oo loogu talagalay FU-1000C
19% off, waqti xadidan oo kaliya
Horudhac FMUSER FU-1000C 1KW FM Gudbiye
Waa maxay astaamaha idaacada FM-ta ee kilowatt tayo sare leh? Qiimaha miisaaniyada? Summada caanka ah? Mise saamaynta maqalka ee CD-ga? Haddii aad u baahan tahay inaad iibsato gudbiye heer kiilowatt ah oo ay ku jiraan astaamahan, FMUSER wuxuu halkan kula talinayaa gudbiyahaan: FU-1000C 1000W FM gudbiyaha baahinta raadiyaha.
Haddii aad rabto inaad doorato gudbiyaha ugu wanaagsan ee heerka kilowatt FM, dooro FU-1000C, waxaad ku dari doontaa aaladda qalabka baahinta awood badan xaruntaada qiimo macquul ah.
Tani sidoo kale waa doorashada ugu horreysa ee ugu wanaagsan inta badan hawlwadeennada idaacadaha FM-ka ee dhexdhexaadka ah. Bal qiyaas haddii aad ku nooshahay waddamada xeebaha ah ama gobollada (sida Filibiin, Indonesia, Thailand, Vietnam, iwm.), waa inaad la kulantaa heerkul aan la saadaalin karin iyo huurka, roobka, soo-gaadhista qorraxda, iyo arrimo kale oo aan la xakamayn karin.
Si kasta oo ay u qurux badan tahay gudbiyaha ama sida caanka ah ee astaanta u tahay, kaliya hal arrin, tusaale ahaan, hawada qoyan, ma la burburin karaa gudbiyaashaas qaaliga ah? Si kasta oo gudbiyahan looga keeno Talyaaniga ama Mareykanka, arrimo aan la xakameyn karin ayaa si weyn u gaabin doona rajada nolosha gudbiyaha. Marka, maxaad u dooran weyday gudbiye FM miisaaniyad badan?
FMUSER FU-1000C waa gudbiyaha ugu badan ee 1KW FM ah
Fadlan ogow in qiimaha gudbiyaha maqalka ee FU-1000C FM uu aad uga badan yahay cabbirrada kore. Gudbiyaha FM-ka ee FU-1000C waa gudbiye 1000W FM ah oo ku qalabeysan interface USB ah. Laakin awoodeeda baahinta FM-ta ah ee xirfada leh waxay kaa dhigi kartaa mid aad uga careysiiso hufnaanteeda baahinta.
Isku xirka USB-ga ee kuxiran wuxuu si dhab ah u garwaaqsadaa shaqada is dhexgalka gudbinta bini'aadamka, kaliya dhowr tillaabo dhowr daqiiqo gudahood: ka soo saar USB-gaaga, ku xir gudbiyaha, isticmaal garaaca orodka, waxa kaliya ee harayna waa in la ciyaaro muusiga. !
Aad u fudud, sax? Taasi waa run, gudbiyaha 1000 W FM, waxaad ku heli kartaa raaxaysi maqal oo tayo sare leh oo uu keeno FMUSER FU-1000C
FU-1000C waa gudbiyaha 1000W FM ee baahinta ku qalabaysan interface gelinta RDS, kaas oo kuu ogolaanaya inaad sahamiso in badan oo cufnaantaada baahinta (Qodobka RCA sidoo kale waa la taageerayaa).
Waxaad kula xiriiri kartaa dhagaystayaashaada macluumaad erayo ah marka lagu daro calaamadaha maqalka si ay dhagaystayaashaadu u helaan macluumaad badan oo ku saabsan baahinta raadiyahaaga!
FU-1000C 1000W FM gudbiyaha waxaa lagu qalabeeyay galinta orodka hore, kaas oo ay ka go'an tahay naqshadaynta khibrad adeegsi oo aad u wanaagsan.
In kasta oo qalabkan baahintani uu ku adag yahay arrimaha hawlgalka iyo qaab-dhismeedka, haddana waxay u tahay qof injiil ah, gaar ahaan isticmaaleyaasha si adag uga soo horjeeda qalabka baahinta ee ay adag tahay in la isticmaalo, garaaca orodka ayaa weli ka dhigaya hawlgalka qalabku inuu noqdo mid ku habboon. .
Dhanka ilaalinta, FU-1000C FM stereo baahinta baahinta ayaa si hufan uga fogaan kartaa inay saameyn ku yeelato arrimaha dibadda iyo gudaha, tusaale ahaan, dhanka heerkulka kulaylka badan, waa kan waxa gudbiyaha dhaqameed ee FM-gu noqon doono: heerkulka shaqadu wuxuu helayaa sare iyo ka sareeya oo ma joogsan doono ilaa gudbiyaha gubo.
Taa baddalkeeda, gudbiyaha raadiyaha FU-1000C FM wuxuu si otomaatig ah isu ilaalin doonaa heerkulka kulaylka badan, iyo sidoo kale, is-ilaalinteedu wali way daaran tahay marka saamiga mowjadda taagani uu sarreeyo sababtoo ah isku-xirnaanta anteenooyinka baahinta FM-ka.
Markaa doorashada FU-1000C ee idaacadaada waxay la macno tahay inaad kaydiso kharashka wakhtigaaga iyo hagaajinta hufnaanta shaqada. Gudbiyaha FU-1000C FM stereo wuxuu leeyahay sifooyinka adkeysiga iyo wax ku oolka, kaas oo si wax ku ool ah u kordhin kara nolosha dhabta ah ee xarunta raadiyaha oo kaa caawin kara inaad dhisto shabakad daboolan oo raadiyaha ah oo dhamaystiran aag weyn.
FMUSER FU-1000C waa Xarunta Raadiyaha FM-ka ee ugu qiima jaban ee 1KW
Haddii aad rabto in aad samayso baahinta FM-dhexdhexaad ah oo deggan xaaladaha soo socda, markaa Fu-1000C hubaal waa kaaliye! Isagoo ah gudbiyaha 1000W FM ee ugu iibinta badan ee raadiyaha, FU-1000C waxaa la caddeeyay inuu awood u leeyahay inuu u isticmaalo xaalado kala duwan oo kala duwan, oo ay ku jiraan kaniisadda baabuur-wadidda, goobta baarkinka kaniisadda, kaniisad baabuur-wadidda, filim-wadidda iwm.
Wad koronto dhexdhexaad ah oo ku jira Soo-qaadista Gudbinta FM
Haddii aad tahay maareeye raadiyaha oo maamusha magaalo yar oo leh kaniisado badan oo baabuur-waditaan ah iyo masraxyo lagu wado, gudbiye FU-1000C FM oo la isku halayn karo ayaa kaa caawin kara inaad si wanaagsan u maareyso arrimahaaga baahinta oo u abuurto fursado ganacsi oo aan xadidnayn adiga iyo magaaladaada.
Haddii aad horey u waddey kaniisad baabuur-wadidda ama filin-wadidda ama aad rabto in aad tijaabiso adeeg cusub oo wadista, gudbiye FM ah oo la isku halayn karo ayaa loo baahan yahay si uu kuu weheliyo.
Bal qiyaas sida ay macno u leedahay: in la siiyo madadaalo qoys oo diirran, nool iyo badbaado leh qoysas aan tiro lahayn oo hoos yimaada cudurka faafa ee 2021. “Kadib markii uu fayrasku dillaacay, aniga iyo xaaskayga Sally waxaan ku qaadanaynay fasaxyo aad u qurux badan oo tiyaatar baabuur ah oo guriga u jira hal mayl, qoysas kale oo badan ayaa annaga nala mid ah, oo isku duubaya qoysaskooda, daawashada filimada dusha baabuurka ama gudaha baabuurka. .
"Ma sugi kari la'dahay in aad bilowdo qorshe kale usbuuca soo socda ee soo socda!"
--- Aaron, Ilocos Sur, Candon, Filibiin
Ahaanshaha Gudbinta FM-ka kaliya maahan Naqshadeynta
Gudbiye FM-ka wanaagsan kaliya maaha mid leh waxqabad awood leh, muuqaal soo jiidasho leh laakiin ka sii muhiimsan waa qiimo macquul ah. FU-1000C, fidiyaha FM-ta ah ee qalin-madoow ee la habeeyey, kaas oo isku daraya sifooyinka aysan lahayn gudbiyaasha ugu badan, ayaa waxaa aaminay hawl-wadeeno badan oo idaacadaha FM ah.
FU-1000C waa gudbiyaha FM-ka ugu fiican ee kaniisada lagu wado iyo masraxa lagu wado, qiimo macquul ah iyo wax qabad aad u wanaagsan ayaa ah sababta aasaasiga ah ee ay u doorteen gudbiyaha idaacada FM FU-1000C.
Haddii aad raadinayso gudbiyaha 1000W FM ee ugu wanaagsan baahinta raadiyaha, dooro FU-1000C.
Haddi aad u raadinayso gudbiyaha 1000W FM ee ugu wanaagsan filimada wadista, dooro FU-1000C.
Haddii aad raadinayso gudbiyaha 1000W FM ee ugu wanaagsan baahinta kaniisadda, dooro FU-1000C.
Haddii aad raadinayso gudbiyaha 1000W FM ee ugu fiican goobta baarkinka kaniisada, dooro FU-1000C.
FMUSER FU-1000C aad bay u fududahay in la isticmaalo, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad USB-ga ku xidho faylka MP3 interface oo aad ku xidho qalabka korontada. Uma baahnid inaad waqti dheeri ah ku bixiso inaad barato buug-gacmeedka ama aad fiiro gaar ah u yeelato shaqada gacanta ee caajiska ah, gudbiyaha wuxuu u shaqayn karaa si badbaado leh oo caadi ah.
Kaliya waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto tukashada ama daawashada filimka si badbaado leh iyo FU-1000C la isku halayn karo ayaa daryeeli doonta inta kale. FMUSER waxa kale oo ay ku siin doontaa muuqaal hawlgal rakibid fudud YouTube-ka si uu kuugu ogeysiiyo wax badan oo ku saabsan FU-1000C waqti aad u yar gudaheed.
Tayada Warbaahineed ee aadka u wanaagsan ayaa wax walba ka dhigaysa suurtagal
FU-1000C waxay u taagan tahay tayada baahinta sare ee kilowatt ee idaacad kasta oo FM ah oo dhexdhexaad ah oo ku taal adduunka. Ka sokow qiimaha macquulka ah iyo waxqabadka awoodda leh, wax ku oolnimada sidoo kale waa mid ka mid ah sifooyinka ugu weyn ee FU-1000C.
Iyada oo leh tayada baahinta FM-ka ee cajiibka ah, FU-1000C waxay si guul leh u gaadhay hufnaan sare iyo caan ka dhex jirta shirkadaha baahinta waxaana doorbida kuwa jecel idaacadaha FM-ta ee xirfadleyda ah iyo kuwa kale oo badan oo FM ah.
Shakhsiyaadka qaar ayaa u isticmaali doona inay bilaabaan aroos idaacad gaar ah jasiiradda.
"Waxaan la kulmay gacaliyahayga Kathy, waxaan go'aansanay inaan aroos ku qabanno jasiirad yar oo magaalada u dhow, sababtoo ah waxaan ahaa Engineer RF waxaanan go'aansaday in aan u sameeyo aroos raadiye ah oo aan la ilaawi karin. Si aan u dejiyo meel ku habboon idaacadaha, waxaan dhisay idaacad FM ah oo dhexdhexaad ah si aan u sii daynno arooskeena qaraabada iyo asxaabta aan joogi karin, iyada oo inta jeer ee 87.7mhz ah. Dhegayso muusig cad oo aan sanqadh lahayn oo ka baxaya raadiyaha, iyadoo qof walba barakeeyo, si adag ayaanu isku duubninay"
-- Axmad, Jakarta, Indonesia
Eray ahaan, gudbiyaha raadiyaha FU-1000C FM ee FMUSER wuxuu awood u leeyahay inuu baahiyo in ka badan intaad malayn karto.
Gudbiye FM ah 1KW oo Xaqiiqda Buuxiyay Baahiyaha Warbaahineed ee Ugu Dambeeyay
Weligaa ma ku dhibtay dhibaatooyinkan ka hor intaadan iibsan gudbinta FM-heer kilowatt ah:
Markaad iibsanayso gudbiyaha stereo FM ee kiiloowatt ah, waa maxay walxaha ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato?
Maxaad u dooran weyday gudbiyaha 1500W FM ama gudbiyaha 3000W FM, laakiin taa beddelkeeda, dooro gudbiyaha FMUSER 1000W FM?
Wax macluumaad ah oo aan ka heli karo iibsashada gudbiyaha raadiyaha FM? Maxaan ogahay ka hor intaanan bilaabin qorshe ku saabsan iibsashada gudbiyaha FM-ta ee baahinta raadiyaha?
Dadka intooda badani waxay tixgelin doonaan calaamadda marka hore, oo ay ku xigto qiimaha. Dhab ahaantii, marka lagu daro macluumaadka kor lagu soo sheegay, qaar ka mid ah cabbirada gudbinta FM-ka ayaa sidoo kale ah shuruudaha tixraaca ee muhiimka ah ee iibsashada.
FMUSER wuxuu halkan ku qaadanayaa FU-1000C tusaale ahaan nuxurka soo socda si uu u soo bandhigo dhowr cabbir oo muhiim ah oo ay tahay inaad ka fiirsato ka hor intaadan iibsan gudbiyaha FM stereo.
Marka hore, waa inaad ka fiirsataa qalloocanaanta gudbiyaha baahinta FM-ta. Sidaad ogtahay, ma aha calaamad kasta oo aad geliso gudbiyaha FM-ka stereo si buuxda loogama gudbin karo isla booska, qallooca calaamaduhu waa lama huraan.
Cod-weyneyeeyaha qaar ka mid ah war-fidiyeyaasha maqalka ee FM wuxuu leeyahay hawl-weyneyn calaamadeed, taasoo sidoo kale keeni doonta qallooc ku yimaadda calaamadda maqalka.
Injineerada RF ee FMSUER waxay ina tusaan xog yaab leh: tisaga FU-1000C FM gudbinta maqalka natiijooyinka tijaabada qalloocan waxay ka yaraayeen 30 Hz - 15000 Hz 0.02%, oo aad uga hooseeya 0.02% gudbiyaha guud ee FM!
Tani waxay barako u tahay kuwa ku raadsada tayada codka saxda ah ee FM-ta gudbinta!
Kala Soocidda Isteerinka
Tani waa caqli-gal la aqoonsan yahay: kala-soocidda stereo waxay noqon kartaa arrin saameyn weyn ku leh dareenka stereo. Markasta oo ay sii xumaato kala soocida stereo, waa sii daciifaysaa dareenka stereo. Ma garanaysaa qiimaha kala soocida stereo-ga ee inta badan idaacadaha idaacadaha FM ay gaari karaan?
Haa, ka weyn ama la mid ah 40 dB at 500 Hz.
Tusmadan waxaa sidoo kale qeexaya Guddiga Farsamada Farsamada ee Caalamiga ah. Laakiin, nasiib wanaag, FU-1000C stereo FM gudbiyaha FMUSER wuxuu gaari karaa in ka badan 60 dB!
Weli waxay u egtahay doorashada ugu fiican ee raadiyahaaga, sax? Aan u abuurno waayo-aragnimo cod stereo weyn taageerayaashaada idaacadaha!
Sida loo ilaaliyo dhagaystayaasha idaacadaha jira oo loo soo jiito dhagaystayaal cusub ayaa ah mawduuca waligeed laga hadlayo ee hawlwadeenada idaacadaha. Laakin waxaa hubaal ah in aysan jirin cid diyaar u ah in ay dhageysato barnaamijka raadiyaha ee buuqa badan.
Haddaba su'aashu waxay tahay, sidee ayaad si buuxda ugu gudbin kartaa ishaarada raadiyaha daacadnimada sare ee dhagaystayaasha? Ha ka welwelin, FU-1000C waxay si fiican u xallin kartaa dhibaatadan.
Sida gudbiyaha stereo FM oo leh saamiga sare ee signal-ilaa-sanqa (≥ 70dB), kaliya ku dar gudbiyaha raadiyaha FM-fu-1000C FM xaruntaada raadiyaha, kama welweli doontid dhammaan noocyada buuqa baahinta ee dhibka leh!
Dabcan, waxaad isticmaali kartaa xogta saxda ah ee ay heleen kooxda tijaabinta FMUSER ka dib markaad tijaabiso gudbiyaha idaacada FU-1000C raadiyaha FM tixraac ahaan si aad u doorato gudbiyaasha kale ee FMUSER, laakiin FMUSER waxay si dhab ah u rajaynaysaa inaad ka faa'iidaysan karto doorashadaada.
isbedbeddelka Modulation Frequency
Habka xasilinta inta jeer Loop-xiran ee PLL
Inta jeer ee gudbinta magaca ah 87 MHz - 108 MHz (frequities kale waa la habeyn karaa)
Leexashada Joogtaynta ± 75 Hz
Qiimaha Tilaabada Joogtada ah 50 Khz
Wax-soo-saarka Wax-soo-saarka 50 Ω
Xidhiidhiyaha wax soo saarka RF L29-K ama xiriiriyeyaasha kale ee la cayimay
Awoodda RF ee soo saarista 0 -1000 W si joogto ah loo hagaajin karo
Weelashada Awoodda Wax-soo-saarka ± 10 W
Weelashada Soo noqnoqoshada Duuliyaha
Xakamaynta Shucaaca Harmonic
Shucaaca Hirarka Hadhaaga Gudaha
Shucaaca Harmonic-Ku-Meel Gaara Sare
Dhawaaqa wax-ka-beddelka dulinka
Isdhexgalka Soo-galinta Maqalka XLR / USB / RCA
Heerka Gelitaanka Maqalka < 15 dBV
Saxeex Saamiga Sawaxanka ≥ 70 dB (1 kHz, 100% habaynta)
Kala Soocidda Isteerinka ≥ 60 dB (L → R, R → L)
Badbaadinta ≤ 0.02% (30 Hz - 15000 Hz, 100% habaynta)
Jawaabta Joogtada ah 50 - 15000 Hz
Horudhaca Maqalka 0 μs / 50 μs / 75 μs ikhtiyaari ah
Farqiga Heerka Kanaalka Bidix Iyo Midig ≤0.05 dB (100% habaynta)
Qadarka Chassis Size 2U (dhererka 530 mm × ballac 340 mm × dhererka 100 mm)
Qadarka Chassis Size 2U (dhererka 20.8-inch × ballac 13.3-inch × 4 inch)
Miisaanka Mashiinka 10 kg
Miisaanka Mashiinka lbs 22
Faafinta Kuleylka Mode: Hawo qaboojin
Heerka Chassis 19 inches
Interface Control Dibadda
Habka Ilaalinta heerkulka sare iyo ilaalinta VSWR sare waa la taageeray
Ku socodsii heerkulka deegaanka
Isticmaalka: 1500 W
Qodobbada ugu muhiimsan ee FU-1000C 1kW FM Gudbinta
Naqshadaynta Nooca Rack-ku-dhan: Waxay la timid waayo-aragnimo baahinta wanaagsan iyo sidoo kale hawl-gal "fudud-fudud", 1000W FM-gudiyaha raadiyaha ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee idaacadaha baahinta FM-ta dhexdhexaadka ah.
Naqshadaynta USB-ga ah: Interface-ka maqalka maqalka ayaa kaa caawin kara inaad si dhakhso ah u soo dejiso oo si toos ah u aqoonsato calaamadaha maqalka MP3 ee dhammaan noocyada waxyaabaha gaarka ah, waxaad had iyo jeer bedeli kartaa mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha maqalka ah waqti kasta.
Qaabka Maqalka ee aadka u wanaagsan: Habka maqalka ee hal-door/steeriyo waa ikhtiyaari inaad daboosho baahidaada dib-u-ciyaarista maqalka ee gaarka ah
Gelida Qaade-hoosaadka SCA/RDS: waxaa lagu taageeraa in la isku daro isticmaalka signalka baahinta qoraalka iyo dhawaaqa baahinta maqalka, taas oo kor u qaadeysa isdhexgalka bini'aadamka-mashiinka iyo bini'aadamka oo ballaarinaya kala duwanaanshaha baahinta dhaqameed.
XLR / RCA / USB Gelida: Calaamadaha maqalka ee stereo waxaa lagu taageeraa in ay si aan kala sooc lahayn u hagaajiyaan cabbirka shaqada faa'iidada maqalka, taas oo ka dhigaysa baahinta raadiyaha mid aad u farxad badan.
1KW TPO: waa la hagaajin karaa ilaa 1000W iyo hal badhan oo dami kara waa la taageerayaa
Ilaalinta SWR ee cusub: waxay hubisaa in dhibaatada ay keentay SWR aan caadiga ahayn aysan saameyn ku yeelan hawlgalka gudbinta, haddii aysan jirin anteeno ku xiran gudbiyaha, ama marka anteenadu ay ku habboon tahay gudbiyaha, shaqada si toos ah ayaa loo bilaabi doonaa oo ilaalinaysa gudbiyaha.
Ilaalinta Agabka Gabi ahaanba Gudaha: Marka heerkulku fiyuusku aad u sarreeyo, gudbiyaha ayaa si toos ah u geli doona xaaladda ilaalinta, kaas oo si wax ku ool ah uga fogaan kara saameyno isdaba joog ah oo ka yimaada heerkulka gudaha ee gudbiyaha.
Xalka Hab-samaynta-yar: waxay hubisaa adkeysiga iyo hufnaanta gudbiyaha raadiyaha FM
Farsamada Xakamaynta Fog ee RS232: waxay ku xidhi kartaa kombayutarka si aad u fuliso hawlgal degdeg ah adigoon fool ka fool u shaqayn gudbinta
Xakamaynta gudbinta ishaarada: waxa ay si dhab ah u gaadhay heerka weecasho ee soo noqnoqda ee hogaaminaysa warshadaha
Shaashadda OLED ee caadiga ah ee 153 x 50 mm waa la qaatay si ay u bixiso soo bandhigid xog fudud oo cad oo wakhtiga-dhabta ah
garaaca orodka ayaa fududayn kara hawlgalka oo si wax ku ool ah u wanaajin kara hufnaantaada hawleed, taas oo aad u yarayn karta kharashaadka wakhtiga
Menu-ku-dhismay tignoolajiyada ilaalinta erayga sirta ah waxay ka fogaan kartaa khaladka oo waxay ilaalin kartaa waxa ku jira faylkaaga sirta ah
Anteenada buuxda ee band taagan iskiriinta saamiga hirarka waa la taageeray si si toos ah loo ogaado inta jeer ee ugu habboon anteenada.
Rikoore digniinta gudaha lagu dhex dhisay oo leh alaarmiga ilaalinta tooska ah iyo shaqada duubista ayaa diyaar u ah in la isticmaalo.
Tignoolajiyada la socodka xogta wakhtiga-dhabta ah waxay ku siinaysaa la socodka signalka maqalka ee shaashadda oo dhamaystiran
Heerka 19-inch chassis ee dhererkiisu yahay 2U wuxuu gabi ahaanba dabooli karaa baahiyahaaga
1 * FMUSER 1000W FM Gudbiye